Fantatrao ve ny SID na "Safer Internet Day"? - Arozaza
Fantatrao ve ny SID na « Safer Internet Day »?
Ankalazaina isaky ny 09 febroary mba hanentanana sy hanaingana ny rehetra indrindra fa ny ankizy sy ny tanora @ fampiasana miaavo ny aterineto (mobilisation du public surtout les enfants et les jeunes pour l’utilisation positive de l’Internet) – Ny fankalazana tamin’ny taona ity no fankalazana faha 18 maneran-tany fa voalohany kosa teto Madagasikara niarahan’ny komity mpikarakara izay tarihin’ny « Ministère de l’Education Nationale » sy ny « operateur telephonique » Telma ary ahitana ny UNICEF, ONG Youth First ary ny Fanilon’I Madagasikara. Ny lohatenin’ny fankalazana maneran-tany dia « Together for a better internet ».
Notontosaina ny talata 09 febroary 2021 lasa teo ny fankalazana ny « Safer Internet Day », tao amin’ny centre Akamasoa (Antananarivo) niaraka tamin’ireo ankizy mpianatra (lahy sy vavy) avy ao amin’ny lycee akamasoa miisa 200. Tonga nanome voninahitra ny fanokafana ny fankalazana tamin’ny fomba ofisialy ny Sekretera Jeneralin’ny Ministère de « l’Education Nationale » , Ramatoa Felamboahangy Ratsimisetra. Sehatr’asa maro no nentina nanatanteraka ny fankalazana: ady hevitra mahakasika ny zavamisy mahakasika ny fampiasan’ny ankizy sy ny tanora ny aterineto, ny lalana mahakasika ny fiarovana ny ankizy amin’ny heloka an’habaka (cybercriminalite), ny vokatsoa sy vokadratsy ateraky ny fampiasana ny aterineto ary ny fomba atao hiarovan-tena amin’ny loza sy herisetra mety ho azo amin’ny fampiasana ny aterineto ary ny fampiasana ny aterineto @ fomba tsara izay nandraisan’ny « Service de la Cybercriminalite de la Police Nationale » sy ny mpanakanto Mirado. Tao ihany koa ny fifaninana “questions pour un champion”, kilalao @ alalan’ny finday ary atrik’asa ho fanabeazana ny ankizy sy tanora ahay handanjalanja ny fampiasana ny aterineto. Tonga nandray anjara tamin’ny hetsika ihany koa ny mascotte “safebook.mg”, mascotte ny securite en ligne eto Madagascar.
Tafita ny hafatra araka ny fijoroana vavolombelona nataon’ireo ankizy sy tanora mpandray anjara teo ampamaranana ny fankalazana. “Izao aho vao mahalala ny fomba hafa mety azo ampiasana ny aterineto ankoatry ny facebook. Manomboka izao aho dia hifanakalo hevitra amin’ny ray aman-dreniko amin’ny fampiasako ny aterineto ary hampahafantatra ireo namako ny fomba tsara hampiasana ny aterineto” hoy ny mpandray anjara iray
Mbola mitohyy eny @ Youth Impact Lab eny Tsimbazaza ny fankalazana ny sabotsy 13 febroary 2021 (a suivre).